Nifidy Mpanao Lalàna Mpomba Ny Demokrasia ireo Mpifidy Ao Hong Kong Mba Hiaro Ny Fizakantenan’ny Tanàna Amin’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2016 14:40 GMT
Nathan Law, 23 taona, ilay vao voafidy sy ny ekipany tamin'ny fifidianana. Sary avy tamin'ny Facebook-n'i Nathan Law.
Nahazo ny maro an'isa tamin'ny seza 19 amin'ireo 35 tamin'ny fifidianana mpanao lalàna ny Alahady 4 Septambra, ny antoko politika mpanohitra ao Hong Kong — fandresena manan-danja izay hanome alalana azy ireo hampiasa ny fahefàny hampiasa vato tsy azo ivalozana amin'ny rafitra mpomba an'i Shina.
Nataon'ny rafitra ara-politika tsy ara-demokratika ao Hong Kong anjorom-bàla, izay ny antsasak'ireo 70 Filankevitra Mpanao Lalàna dia nofidian'ny “fizaram-paritany mahefa” — fandraharahàna, matihanina, ireo vondrona sosialy manokana na ara-pivavahana — ny fahafahana mampiasa vato tsy azo ivalozana amin'ireo lalàna natolotra amin'ny fandanian-dalàna no làlana farany ho an'ny mpanohitra mba hametrahana ny heviny ara-politika.
Vao mainka lasa tena zava-dehibe tokoa io fahefàna io tato anatin'ireo taona vitsivitsy, satria nanandrana ny vahohony amin'ilay tanàna i Beijing. Faritr'i Shina manana rafi-pitantanana manokana i Hong Kong, ary izany sata izany tokony midika fanànana ambaratonga ambony amin'ny resaka fizakantena.
Ny taona 2014, olona an'arivony no nanao hetsika teo afovoan'ny tanànan'i Hong Kong nandritra ny telo volana mba hitaky fifidianana tena ara-demokratika, izay lasa fantatra amin'ny hoe “Occupy Central” (Bodoy ny Afovoany). Tamin'ny nanombohan'ilay hetsika, niharatsy haingana dia haingana ny fifandraisana teo amin'ny mpanohitra ara-politika sy ny governemanta, miaraka amin'ireo demokraty tsy miova hevitra mibahana ny lalàna nolanian'ny governemanta, toy ny tetibola, miaraka amin'ireo fanontaniana sy fanovàna maro. Niteraka olana be teo amin'ny fitantanan'ny Filoha Mpanatanteraka,, Leung Chun Ying, ny tetikadin'izy ireo tsy manaiky fiarahana miasa, ka nanainga ny vahoaka izy mba “hifidy ny hanesorana azy ireo” rehefa tonga ny fifidianana.
Nanao ezaka maro ny ankolafy mpomba an'i Shina mba hizoran'ny fifidianana tamin'izany làlana izany talohan'ny latsabato. Niditra an-tsehatra ny Biraom-Pifandraisana an'i Shina, izay misolo tena ny tanibe any Hong Kong, mba handrindra ireo fanentanana mpomba an'i Shina, ary noahiahiana mihitsy hoe nanome toromarika ny mpiasan'ireo orinasam-panjakana Shinoa any Hong Kong ny amin'ny hoe iza no hofidiana. Taminà hetsika tsy mbola nisy toa azy, nibahana kandidà enina tsy hahazo mirotsaka ho fidiana noho ireo fomba fijeriny ny governemantan'i Hong Kong. Ary nanao fampielezan-kevitra fanaratsiana ireo kandidà mpomba ny demokrasia ireo media lehibe.
Na teo aza ny fanosehana, nanome seza telo amboniny ho an'ny mpanohitra ireo mpifidy, raha oharina tamin'ny fifidianana farany tamin'ny taona 2012, miaraka amin'ny tahan'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana tsy mbola nisy ohatra izany, nahatratra 58 isan-jato.
Sady izay indray, naleon'ireo mpifidy ireo tanora tena mifototra noho izay ireo modimody demokraty mba hisolo tena azy ireo amin'ny Antenimiera. Taratra tamin'ireo mpandresy roa tena nampiaiky, ny safidin'izy ireo, Nathan Law Kwun-chung ary Eddie Chu Hoidick, izy roa ireo izay samy miaro ny fizakantenan'ny tanàna.
Law, 23 taona, nandresy tao amin'ny distrikan'ny Nosy Hong Kong tamin'ny vato maherin'ny 42.000 isa, lasa mpanao lalàna tanora indrindra eo amin'ny tantaran'i Hong Kong. Izy no mpitarika ny mpianatra tamin'ilay hetsika fitorevahana Bodoy ny Afovoany ny taona 2014. (Jereo ny sary eny ambony indrindra.)
Eddie Chu Hoi Dicksy ny ekipany tamin'ny fifidianana. Sary avy tamin'ny Facebook.
Chu, 38 taona, nahazo vato maherin'ny 84 000 isa tany amin'ny Faritra Vaovao any Andrefana. Nanomboka ny fikatrohany ara-tsosialy tamin'ny fanaovan-gazetin'olontsotra izy ny taona 2005, tao amin'ny vohikalan'ny median'olon-tsotra inmediahk.net , ary hatramin'izay, lasa mpikatroka mafana fo tamin'ny fandaminana ny tanàna sy ireo olana momba ny tany. (Famborahana feno: Nanampy ara-bola ny inmediahk.net aho, ary namana akaiky i Chu.)
Samy tao amin'ny ankolafy politika “mpandàla ny ao an-toerana – localist” i Law sy i Chu. Ny teny hoe “localist”, na “mpandàla ny ao an-toerana” dia natao hilazàna ireo mitraka amin'ny heviny hatrany na eo aza ny fidikidiran'i Beijing amin'ny fitantanana ny tanàna, ny fampandrosoana sy ny fomba fiainana, ary mitaky ny fampiharana feno ireo fotokevitra hoe “firenena tokana, rafitra roa” ary “olon'i Hong Kong no mitantana an'i Hong Kong”, araka ny voasoratra ao amin'ny Lalàna Fototry ny lalàmpanorenan'ny tanàna ihany koa ao amin'ny Fanambaràna iombonan'ny Shinoa-Britanika (izay nametraka tamin'i Shina ny fitantanana an'i Hong Kong, zanatany Britanika teo aloha).
Lasan'ny kandidà “mpandàla ny ao an-toerana” ireo seza enina tamin'ireo seza 19 azon'ny mpanohitra ara-politika, tamin'ireo fifidianana mivantana tany amin'ireo distrikan'i Hong Kong, izay nahazo teo amin'ny 20 isanjaton'ny totalim-bato. Milaza ny fanehoankevitra malaza fa fitohizan'ireo hetsika Bodoy ny Afovoany tamin'ny taona 2014 ny fisondrotan'izy ireo. Namoaka sorabaventy avy amin'io hetsika mpomba ny demokrasia io ny olona iray mpanohana an'i Nathan Law, sorabaventy izay naborak'ireo mpanao hetsi-panoherana talohan'ny tsy maintsy nialàny teo amin'ireo toerana nanaovany fihetsiketsehena, manambara hoe, “Mbola hiverina izahay!”
“Mbola hiverina izahay.” Sary avy tamin'ny Facebook-n'i Nathan Law.
Tena tsy mbola nisy ohatr'izany mihitsy ny fahavononan'ireo vahoakan'i Hong Kong hifidy. Tao amin'ny toeram-pifidianana iray, voatery niandry nandritra ny ora efatra mba handatsaka ny vatony tamin'ny 2:30 ora maraina ireo mpifidy izay efa nilahatra talohan'ny 10:30 ora alina, ora ofisialy fiafaran'ny fifidianana.
Feno mpifidy ireo toeram-pifidianana sasany. Sary avy tamin'ny Hong Kong Free Press.
Teo amin'ny 2,2 tapitrisa teo ny fitambaran'ireo mpifidy, ary manakaiky ny 60 isan-jaton'ny vato tamin'ny fifidianana mivantana no lasan'ny mpanohitra.
Araka ny notsipihan'ireo mpitsikera, ho aretin'andohan”i Beijing ireo “mpandàla ny ao an-toerana”, ary ny sivana no fepetra voalohan'ny manampahefana Shinoa, araka ny efa noeritreretina teo aloha. Any amin'ny tanibe Shina, voafafa ireo lahatsoratra amin'ny media sosialy, lasa fotsy ny fàfan'ny fahitalavitra, ary nijanona tsy nanome vaovao momba ireo valim-pifidianana ireo mpanome vaovao.